Wada-hawlgalayaasha Dalxiiska Mekong iyo Hay'adda Dalxiiska ee Thailand
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Wada-hawlgalayaasha Dalxiiska Mekong iyo Hay'adda Dalxiiska ee Thailand
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Safarka • Cambodia Breaking News • News • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Wadajir ahaan TAT, Mekong Dalxiis ayaa ka bilaabay olole xayeysiin cusub Mekong Moments si ay ugu iftiimiso dalxiiska gobolka iyo mowduucyada soo jiidashada leh ee Thailand iyo gobolka si loogu dhiirrigeliyo dalxiiska GMS.
Iyada oo loo marayo dadaallo iskaashi oo ka socda Xafiiska Isuduwaha Dalxiiska Mekong (MTCO) iyo Hay'adda Dalxiiska ee Thailand (TAT), sagaal wadiiqo oo cusub ayaa lagu soo kordhiyay websaydhka ganacsiga bulshada ee Mekong Moments iyada oo la isku dayayo in laga caawiyo kor u qaadista qaar ka mid ah hantida qarsoon ee Thailand ee ku dhex taal Weyn Weyn Gobolka Mekong (GMS).
Waxaa soo diyaariyay Istaraatijiyadaha Chameleon ee xubinimada UNWTO, Mekong Moments waxaa fuliya qaabka iskaashiga dadweynaha iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay ee loo yaqaan 'Destination Mekong' waxaana ku shaqeeya habka maaraynta ganacsiga bulshada ee 'ENWOKE'. Iyada oo laga faa'iideysanayo astaamaha wadaagista warbaahinta bulshada, MTCO waxay si wax ku ool ah u bilowday ololahan suuqgeynta macaamiisha ee muuqaalka ah si kor loogu qaado marin kasta oo safar ah (oo ay weheliso in ka badan 100 khibradood oo laga dhex helay) iyagoo metelaya TAT. Wadooyinka waxaa loo aqoonsaday sida soo socota:
• Wadada Xeebta Koofureed
• raadadka daah furka Mekong
• Wadada Bariga-Galbeed
• Jidka 8
• Wadada Shaaha ee Mekong Shaaha
• Dhaxalka Dhaxalka Waqooyiga
• Wareejinta Wabiga Mekong ee Saddex-xagalka Dahabka ah
• Dariiqa Dhexe ee Eebaha Budha
• Mashaariicda Royal
Hadda ku noolow barta www.mekongmoments.com, mid kasta oo ka mid ah marinnada waxay leeyihiin degel loo qoondeeyey, kaas oo dadka martida ah siinaya aragti qoto dheer oo ku saabsan safarka guud iyo sidoo kale waaya-aragnimadiisa la xiriira - badankoodna Thailand. Si looga caawiyo gacan ka geysashada dadaal ballaaran oo dalxiis oo ku baahsan dhammaan waddamada GMS, TAT waxay la shaqeysay MTCO si loogu daro dhowr khibrad marin oo waddan kasta oo deris la ah gobolka (Laos, Myanmar, Cambodia, Vietnam, iyo Shiinaha). Wadada fog ee cinwaankeedu yahay 'Mekong Tea Caravan Trail', tusaale ahaan, waxaa ku jira waayo-aragnimo mawduucyo ku saabsan Thailand, Laos, Myanmar, iyo Shiinaha.
“Wada shaqeynta aan la leenahay“ MTCO] iyo Destination Mekong si loogu oggolaado safarrada gudaha iyo kuwa caalamiga ah inay la wadaagaan waaya-aragnimadooda marka ay ku safrayaan waddooyin mowduucyo badan leh oo asal ahaan ka soo jeeda Thailand, iyo sidoo kale booqashada Thai Royal Projects ma aha oo kaliya inay la jaanqaadayso dadaalka TAT ee horumarinta meelaha labaad , laakiin Mekong Moments sidoo kale waxay u oggoshahay ganacsiyada yar-yar ee gobolladan inay dhisaan karti iyo inay ganacsi wadaan, ”ayuu yiri Mr. Kitsana Kaewtumrong, oo ah Agaasimaha Fulinta ee Waaxda Xayeysiinta iyo Xiriirka Dadweynaha ee TAT.
Markaad booqato bogga marinka, martida waxaa lagu soo dhoweeyaa habeyn isku dhafan oo ah qoraallada warbaahinta bulshada oo muujinaya meelaha iyo waaya-aragnimada la xiriirta marinka. Qayb kasta oo ka mid ah waxyaabaha ay ka kooban tahay warbaahinta (oo u qalma hashtags habboon) waxay ku xireysaa bogagga khibradaha isku xiran ee ku yaal Mekong Moments, waxay bixisaa macluumaad ku saabsan waayo-aragnimada iyo sidoo kale isku xirka kanaalada ballansashada.
Qoraalada warbaahinta bulshada sidoo kale waxaa lagu sifeyn karaa sideed kala duwan 'Noocyada Musaafiriinta' - SHAQO, DHAQAN, WELLNESS, FOODIE, NATURE, MIISAANIYAD, RAAXO, iyo QOYS. Adoo gujinaya mid ka mid ah miirayaashaas, booqdayaashu waxay heli karaan waayo-aragnimo ku habboon qaabkooda safarka. Intaa waxaa sii dheer, barnaamijka 'Mekong Moments' wuxuu kaloo u oggolaanayaa dadka soo booqda inay si gaar ah u raadsadaan khariidad is-dhexgal leh oo lagu calaamadeeyay tilmaamo la riixi karo.
Bilaabidda ololahan, ku dhowaad 130 khibradood oo shaqsiyadeed oo wadar ah ayaa lagu daray meekhadhka 'Mekong Moments' ee khibradda 10,000-waayo-aragnimada illaa iyo hadda. Khibradaha sida 'King Taskin Shrine' (Koonfurta Xeebta Koonfureed), 'Angkhang Nature Resort' (Mashruucyada Boqortooyada), iyo Sukhothai Park Park (Wadada Dhexe ee Sayid Buddha) waa la arki karaa, iyagoo siinaya faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan khibrada marka lagu daro wax kasta laxiriira waxyaabaha warbaahinta bulshada ka xanaaqsan. Khibrad kasta waxaa lagu calaamadeeyaa mid ka mid ah shanta khibrad ee shaandheyn kara - DO, GUUR, JOOJI, DUKAAN, iyo Dhadhaminta.
"Waxaan ku faraxsanahay inaan la shaqeyno Hay'adda Dalxiiska ee Thailand [TAT] si loo soo bandhigo wadooyin mowduucyo mowduucyo badan leh oo ku yaal Gobolka Mekong, oo laga keenay Thailand," ayuu yiri agaasimaha guud ee MTCO Jens Thraenhart.
Aragtida TAT ee aragtida booqdayaasha si looga falceliyo dalxiiska iyadoo la soo bandhigayo meelaha labaad, waxaan ku faraxsanahay inaan taageerno istiraatiijiyadda barnaamijkeenna dhiirrigelinta safarka ee Mekong si aan ugu kaxeyno ganacsiga shirkadaha yaryar ee socdaalka ku shaqeeya oo ay ku shaqeynayaan tikniyoolajiyad ganacsi bulsheed oo casri ah ENWOKE.